admin – Somalia
OGEYSIIS: Deeq Waxbarasho oo Ireland ah
FaafinBy admin September 2, 2020 Leave a comment
Ardayda Soomaaliyeed ee danaynaysa minxo ama deeq waxbarasho oo dalka Ireland ah waxa ay ka heli karaan linkiga hoose oo ay faahfaahinta iyo sida loo dalban karo ay ku qoran tahay. https://www.irishaidfellowships.ie/strands/ireland-fellows-programme-africa
Danjiraha oo Shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalmaha Xorriyadda
FaafinBy admin June 30, 2020 Leave a comment
FURSAD: Deeq Waxbarasho oo Japan ah
FaafinBy admin June 6, 2020 Leave a comment
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ardayda Soomaaliyeed u soo bandhigaysaa fursad deeq waxbarasho oo ay bixinayso dowladda Japan. Qofkii doonaya waxa uu ka daalacan karaa qeybta hoose ee qoraalkaan.
Minxooyin Waxbarasho oo Switzerland ah. PhD, PostDoctoral iyo Research Fellowship
FaafinBy admin September 16, 2019 Leave a comment
Dalka Switzerland waxa uu Soomaaliya ugu deeqay minxooyin waxbarasho oo kala ah Postdoctoral, PhD iyo Research Fellowship. Dadka doonaya in ay ka faa’iideystaan fursadahan waxa ay macluumaadka ka heli karaa linkiyada hoose. Sidoo kale, Waxa aad qeybta Hoose ka heli kartaa Foomamkii aad buuixin lahayd iyo macluumaad kale oo ku saabsan deeqda waxbarasho.